Ngubani ongene kwiakhawunti yam ye-imeyile? | Iindaba zeGajethi
Enye yezona zinto zixhalabisayo esinokuba nazo nangaliphi na ixesha, ku ithuba lokwazi ukuba ngubani ongene kwiakhawunti yam ye-imeyile, Imeko yenye yezona zifunwa kakhulu kwi-Intanethi ukuzama ukomeleza imfihlo kunye nokhuseleko.
Ngethamsanqa kwabanye kwaye ngelishwa kwabanye, kukho iindlela ezithile zokwazi ukuba ngaba iakhawunti yethu yaphuliwe nangayiphi na indlela; Zombini i-Yahoo kunye ne-Gmail zixhalabile kule meko, ukungafani kwiHotmail (ngaphandle kokuqinisekiswa kabini), apho kusekho inani elikhulu lezikhalazo malunga nabasebenzisi abaphulukene neakhawunti yabo ngenxa yokuba abanye abanganyanisekanga, bangene kuyo, batshintsha yonke into ngaphakathi (ngakumbi iphasiwedi kunye nombuzo oyimfihlo). Kule nqaku, siza kubonisa izikhokelo ezimbalwa onokuzenza nanini na (kwi-Yahoo kunye ne-Gmail) ukwazi ngubani ongene kwiakhawunti yakho ye-imeyile.
1 Yazi ukuba ngubani ongene kwiakhawunti ye-imeyile ye-Yahoo!
2 Yazi ukuba ngubani ofake iakhawunti yam ye-imeyile kwiGmail
Yazi ukuba ngubani ongene kwiakhawunti ye-imeyile ye-Yahoo!
Ukuba umbuzo wangoku onawo "ukwazi ngubani ongene kwiakhawunti yam ye-imeyile isuka kuYahoo », emva koko siza kuchaza amanyathelo ambalwa oza kuwalandela ukuze uqiniseke ngemfihlo ye-imeyile yakho. Ukwenza oku kunye neendlela ezimbalwa ezilandelelanayo (njengoko sisebenzise kumanqaku aliqela) siza kukuxelela into ekufuneka uyenzile ukwenza lo msebenzi:
Okokuqala, singena kwiakhawunti yethu ye-imeyile kunye neenkcukacha ezifanelekileyo (igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha).
Masizame ukujonga ukuba ngaba kukho naluphi na uhlobo lomsebenzi osolisayo kwibhokisi yeposi (nayo, kwindawo yokuphinda usebenzise kwakhona).
Indawo yeSpam nayo ingasinika ulwazi, kuba kusenokubakho amaphepha esingabhalisanga kuwo.
Emva koko kuya kufuneka ucofe kuseto (uphawu lwevili legiye elibekwe kwicala lasekunene).
Ukusuka kukhetho olubonisiweyo sikhetha "uKhuseleko"
Siza kutsibela kwangoko kwenye ithebhu yesikhangeli.
Apho kuya kufuneka sibeke iphasiwedi yethu yokungena kwakhona.
Kule meko, siya kwindawo "yokuNgena kunye noKhuseleko".
Ukusuka kukhetho olukhoyo apho, sikhetha leyo ithi «Jonga umsebenzi wokuNgena ngoku«.
Siza kutsiba kwi-interface entsha ngaphakathi kwewindow enye.
Kukule ndawo apho siza kugxila khona okomzuzwana; Apha sinokuncoma ngokweenkcukacha, ubuyintoni umsebenzi esiye sawenza. Iikholamu ezahlukeneyo ziya kubakho apho, apho:
Iindlela ezahlukeneyo zokufikelela.
Yinto onokuyithanda ngayo nganye yezi kholamu; Eyokugqibela yeyona ibaluleke kakhulu kuzo zonke, kuba kukho utolo olwehlayo oluncinci, olongeze ukusinika indawo yofikelelo olwahlukileyo esinalo (okanye ezo zenziwe ngomnye umntu ngaphandle kwemvume yethu), nazo Inketho yokujonga idilesi ye-IP ikhoyo. Indawo ibaluleke kakhulu, kodwa omnye umntu unokuhlala kufutshane nathi, into eza kutyhilwa ukuba idilesi ye-IP eboniswe kwisiganeko ngasinye yahlukile kule inikezelwa ngumboneleli ngenkonzo.
Kwinxalenye yokugqibela yeli nqaku siza kukushiya ikhonkco ngqo ekufuneka uye kulo ukuze ubeke iziqinisekiso zakho, kwaye ufuna ukuya kule ndawo siyichazileyo ngokweenkcukacha.
Yazi ukuba ngubani ofake iakhawunti yam ye-imeyile kwiGmail
Ukuze ukwazi hsen ngubani ongene kwiakhawunti yam ye-imeyile KwiGmail, imeko ilula kakhulu kunale besikhe sayichaza ngaphambili kwi-Yahoo; Apha kuyakwanela ukuba ufake iakhawunti yethu ye-imeyile kunye neenkcukacha ezifanelekileyo (igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha) emva koko uye ezantsi kwesikrini.
Apho siya kufumana ukhetho othi Ulwazi oluneenkcukacha«, Ekufuneka sicofe kuyo ukuzisa iwindow entsha edadayo. Izakubonisa into efana ncam nale uYahoo asinika yona, oko kukuthi, iikholamu ezininzi ezineenkcukacha zesikhangeli sokungena, idilesi ye-IP, indawo kunye nomzuzu (okanye ixesha elichanekileyo) apho singene khona.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Ukuqinisekiswa kabini kufikelela kwiiakhawunti zeMicrosoft
Isixhumanisi: Ukuqinisekiswa kwe-Yahoo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Amaqhinga ukwazi ukuba ngubani ongene kwiakhawunti yam ye-imeyile
Uluhlaziya njani ulwazi kubaqhagamshelwa bethu beGmail ngokuzenzekelayo